आफ्नो पार्टीले सरकार छाड्नेबारे बाबुराम भट्टराईले गरे यस्तो खुलासा !
आफ्नो पार्टीले सरकार छाड्नेबारे बाबुराम भट्टराईले गरे यस्तो खुलासा !
काठमाडौँ - समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले दसैँपछि अल्टिमेटम दिएर सरकारबाट बाहिरिने बताएका छन् । राजधानीमा बिहीबार पत्रकारहरुसँगको छलफलमा बोल्दै अध्यक्ष भट्टराइले फोरम र नयाँ शक्तिबीच एकता गर्दा भएको सहमति अब पूरा हुने बताएका हुन् ।
‘फोेरमसँग एकीकरण गर्दा यही सहमति भएको हो । त्यो सहमति अब पूरा हुँदैछ । अब हामी धेरै पर्खिदैनौँ,’ डा. भट्टराईले भने । उनले अहिले आफुहरु पार्टी एकिकरण र समायोजनमा व्यस्त भएको भन्दै पार्टी एकीकरण सकिने बित्तिकै सरकारलाई एउटा अल्टिमेटम दिने र सरकारबाट बाहिर निस्कने बताए ।
उनले सविधान संशोधनप्रति सरकार गम्भीर नभएको पनि बताए । भने, ‘सरकार संविधान संशोधनप्रति गम्भीर छैन, हामीले यो थाहा पाइसकेका छौँ ।’